တွေးမိတာလေးတွေ၊ ခံစားမိတာလေးတွေကို ဖွင့်ချထားတဲ့ နေရာလေးတခုပါ။
အမေရိကားခရီးစဉ် - ၃
ဗိုက်လဲပြည့်၊ လူလဲလန်းဆန်းသွားပြီး အချိန်ရသေးတာမို့ လေဆိပ်ထဲက ဆိုင်တွေ လျှောက်ကြည့်ကြပါ တယ်။ အရသာမျိုးစုံနဲ့ ရေညှိချပ်တွေ၊ ရေညှိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ သွားရည်စာ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်၊ လက်ဖက်ခြောက်တွေ ၀ယ်ချင်စရာတွေချည်းပဲ။ မိုးဦးရဲ့ Handcarry အိတ်က နေရာဆံ့သေးတာမို့ ရေညှိထုပ် တွေဝယ်လိုက်ကြသေး တယ်။
Schedule အတိုင်း မနက် ၁၀နာရီ ၅၀ လေယာဉ် စထွက်ပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ခရီးသည် ၃ပုံ ၂ပုံလောက်က ကိုရီးယားလူမျိုးတွေပါ။ ပုံစံကြည့်ရတာ ကိုရီးယားကနေ သွားလည်တဲ့လူတွေထက် အမေရိကားကနေ ကိုရီးယား လာလည်ပြီးပြန်တဲ့လူတွေ ပိုများတယ်ထင်တာပဲ။ မိုးဦးငယ်ငယ်တုံးက ခရီးသွားရင် ကားပဲစီးစီး၊ ရထားပဲစီးစီး အရမ်းမူးတတ်တဲ့သူပေမယ့် လေယာဉ်ဆိုတာတော့ စစီးဖူးထဲက တခါမှ မူးတယ် ဆိုတာမရှိဖူးဘူး။ သနားစရာလေးနော်။ မူးမှာကိုမကြောက်ပေမယ့် ၁၂နာရီကျော်လောက် လေယာဉ်ပေါ် မှာပဲအချိန်ကုန်ရမှာ၊ ဟိုရောက်ရင်လဲ ချီကာဂိုထဲဆက်တိုက်လည်မှာဆိုတော့ အားရှိအောင် စားလို့ရသမျှ အကုန်စားမယ်၊ အိပ်လို့ရသလောက် အိပ်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်။
ဘာမှ မလုပ်ရဘဲ ဒီတိုင်း ထိုင်နေရတာလဲ ဗိုက်ကဆာတာပဲ။ လေယာဉ်မယ်လေးတွေလာကျွေးတဲ့ ပျားရည်လူး မြေပဲ စားရင်း အအေးသောက်ရင်း နေ့လည်စာ လာကျွေးမယ့်အချိန်ကိုလည်ပင်း ရှည်ပြီး မျှော်နေရင်း ကိုရီးယားလေကြောင်းဆိုတော့ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ ဘီဘင်ဘတ်တော့ ကျွေးမှာ သေချာတယ်။ ငါစားချင်တာနဲ့ကွက်တိ ပေါ့။ လွဲချင်တော့ အဲ လေယာဉ်မယ်လေး တွေပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လိုကို ဘယ်လိုပြောလိုက်သလဲမသိပါဘူး။ ကိုယ်နားလည် လိုက်တာက ဘီဘင်ဘတ်ကို အမဲသားနဲ့ ကြက်သားနဲ့ရမယ်ပေါ့။ မိုးဦးတို့ညံ့ချက်။ နားထောင်တာကလဲ လျှမ်း၊ ကိုရီးယားတွေ ဘီဘင်ဘတ် ကို အမဲသားပဲ လုပ်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာလဲ သတိမထားလိုက် မိတဲ့မိုးဦး ကြက်သားလို့ ဖြေလိုက်တာ ကိုယ့်ရှေ့ အစားအသောက်ဗန်းရတော့မှ လွဲတယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်။ သူတို့က အနောက်တိုင်းစာ ကြက်သား၊ အမဲသား ဘာစားမလဲ။ ကိုရီးယား ဘီဘင်ဘတ်လဲ ပါပါတယ် လို့ပြောတာကိုး။ ညီမလေးကတော့ ပိုင်တယ်။ သူကတော့ အမဲသား၊ ကြက်သားဂရုမစိုက်၊ ဘီဘင်ဘတ်မှ ဘီဘင်ဘတ် ပဲပြောလိုက်တော့ သူကတော့ ကွက်တိ။ အဲဒါနဲ့ ပြန်လဲ မလဲခိုင်းချင်တော့တာနဲ့ ကိုယ်ရတဲ့ ပျစ်ချွဲချွဲ အီတီတီအနှစ် တွေဆန်းထားတဲ့ ကြက်သားပြုတ်နဲ့ အသီးအရွက်တွေကိုပဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွန်ပါတယ်၊ ဗိုက်နာမှာ စိုးရိပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့လို့ အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်းပြီး စားလိုက်ရပါတယ်။ ညီမလေးဆီက မြည်းကြည့်တာ စားလို့ကောင်းတယ်။
စိတ်ရှိတိုင်း စားခွင့်မကြုံလိုက်တဲ့ Inflight Bibimbap
စားပီးတော့အိပ်ပေါ့။ အိပ်ပြီးတော့ရော။ စားစရာထပ်မျှော်ပေါ့။ အဲ လေယာဉ်မယ်ညီမလှလှ လေးတွေက အဆာပြေစားစရာ ကိတ်မုန့်လေးတွေ၊ ရေညှိပတ် ထမင်းသုံးမြောင့်ထုပ်လေးတွေကို ဗန်းထဲထည့်ပြီး နေ့လည်စာနဲ့ ညစာစားချိန်ကြား လူတွေ ဆာလောက်တဲ့အချိန်ကျရင် လိုက်ကျွေးပေမယ့် ခရီးသည်တွေကို မေးတာလဲမြန် လမ်းလျှောက်တာလဲ မြန်ဆိုတော့ ပထမအခေါက်မှာ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ လှမ်းခေါ်တာ မမီလိုက်ဘူး။ ဘာရမလဲ နောက်တခေါက်ပြန်လှည့်လာတော့ ကိုယ့်ခုံမှာ အသင့်အနေအထားနဲ့ စောင့်နေမှပဲ စားချင်တာ စားရတော့တယ်။ မိုးဦးရဲ့ အစာအိမ်က အချဉ်၊ အစပ်နဲ့ အေးစက်စက် ဟာတွေဆို သိပ်စားလို့ မရတဲ့လူဆိုတော့ ရေညှိထမင်းထုပ်ကိုတော့ မစားရဲဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြိမ်းဝါးထားတယ်။ နောက်တနပ်ကျွေးရင် ဘီဘင်ဘတ်မှ ဘီဘင်ဘတ်ပဲလို့ ရွတ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထပ်လွဲပါတယ်။ ညစာကျတော့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဖတ်လို ခေါက်ဆွဲအေးစက်စက်တွေထဲကို သွားတိုက်ဆေးတောင့်လို အတောင့်ထဲက ငရုတ်သီးအနှစ် တွေညှစ်ထည့်စားရတဲ့ ကိုရီးယား ရိုးရာ ခေါက်ဆွဲ နောက်တမျိုး နဲ့ နောက်တမျိုးက ထုံးစံအတိုင်း အသား၊ အသီးအရွက်ပြုတ်နဲ့ အာလူးပြုတ်။ :(- ညီမလေးစားနေတဲ့ အေးစပ်စပ် ခေါက်ဆွဲကိုကြည့်ပြီး ဗိုက်နာမှာစိုးလို့ မစားရဲတော့ အနောက်တိုင်းဆန်သူကြီးလုပ်ရပြန်ပါတယ်။ အခုပိုစ့်ကို ရိုက်ရင်းနဲ့မှစဉ်းစားမိတယ်။ ငါဘာလို့များအဲအချိန်မှာတုံးက လေယာဉ်မယ်လေးကို မမေးမိပါလိမ့်လို့။ ဘီဘင်ဘတ် တဗူးလောက်များကျန်သေးရင်ငါ့ကိုကျွေးပါလားဟယ်လို့။ :)
နောက်တနပ်ထပ်စားပြီး နောက်ဘယ်နှစ်နာရီ ထပ်အိပ်ရအုံးမလဲ တွက်ပြီး ထပ်အိပ်ပါတယ်။ တရေးနိုးရင် အဆာပြေမုန့်ထပ်တောင်းစားပါတယ်။ ထပ်အိပ်ပါတယ်။ လေယာဉ်ဘေး ပြတင်းပေါက်တွေလဲ ပိတ်ထားတော့ ညဘက်အိပ်ရတဲ့အတိုင်းပဲ။ အဲဒါနဲ့ လေယာဉ်မယ်မမများက သင့်တော်တဲ့အချိန်ကျလို့ ပြတင်းပေါက်တွေလဲလိုက်ဖွင့်လိုက်ရော မိုးကြီး ထိန်ထိန်လင်းနေပါရော။ အဲဒါနဲ့ မနက်စာ ထပ်စားရပြန်ရော။ ခဏနေကျရင် ချီကာဂို အိုဟဲ လေဆိပ်ကို ဆင်းတော့မယ်လေ။ ဆိုလ်းကထွက်လာတာ သြဂုတ် (၅)ရက် မနက် ၁၀နာရီ၅၀၊ ခု ချီကာဂိုရောက်တော့ လဲ သြဂုတ် (၅)ရက် မနက် ၉နာရီခွဲ။ အရှေ့နဲ့အနောက် အချိန်ကွာခြားချက်ကြားမှာ မိုးဦးတို့ တရက်နောက်ပြန်ရောက်သွားတာလား၊ တရက်ပိုနေလိုက်ရတယ် ပြောမလား။
ချီကာဂိုလေဆိပ်ဆင်းတော့ စိတ်ကတော်တော်အေးသွားပီ။ ငါတို့တော့ အမေရိကားမြေကို နင်းပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် စိုးရိမ်စိတ်ကတော့ ရှိပါသေးတယ်။ အနီရောင်ပတ်စ်ပို့လေးကိုင်ပြီး ကိုယ့် နိုင်ငံထက် ခေတ်မှီတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေကို ယောင်လည်လည်သွားရတဲ့ လူတွေ တော်တော်များ များ ရဲ့ ခံစားချက်လို့ထင်ပါတယ်။ အကုန်လုံးတော့ အဲလိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ သွားနိုင်တဲ့လူတွေလဲ အများကြီးရှိမှာပါ။
စိုးရိမ်ကာမှ စိုးရိမ်ရော။ လောလောဆယ် လူကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ကလဲ လုပ်ချင်သေးတယ်။ တောက်လျှောက်ကြီး လိန်ပိန်အိပ်လာတာ လူက ဘယ်မှာလာ သပ်ရပ်တော့မလဲ။ အဲဒါနဲ့ Immigration မ၀င်သေးဘဲ သန့်စင်ခန်းအရင်ဝင် မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက်၊ အပိုယူသွားတဲ့ အ၀တ် တစုံကိုတောင် ထုတ်လဲလိုက်သေးတယ်။ ပြီးတော့မှ Immigration Counter မှာဝင်တန်းစီပါတယ်။ အဲမှာလဲ မျက်နှာငယ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ ကောင်တာထိုင်နေတဲ့အရာရှိကညီမလေးရဲ့ပတ်စ်ပို့ကို သေချာကြည့်ပြီး ကို ၀င်ခွင့်ထုပေး ဖို့ပြင်နေပါပြီ။ အဲအချိန်မှာ သူ့ထက်စီနီယာကျတယ်ထင်ရတဲ့ တခြားအရာရှိတယောက် က ရောက်လာပြီး မေးခွန်းတွေထပ်မေးပါတယ်။ ဘယ်လောက်နေမှာလဲ။ ညီမလေးကလဲ ရိုးသားစွာ (၂)လနေမယ်ပေါ့။ အဲတော့မှ အရာရှိက နင်တို့အခမ်းအနားတက်ဖို့လာတယ်ဆိုရင် ၁ပတ်လောက်နဲ့ လုံလောက်တာ (၂)လ နေဖို့လိုလို့လား စသဖြင့်ပေါ့။ ညီမကလဲ စွာပါတယ်။ ငါတို့က အခမ်းအနားကို ကူလုပ် ပေးဖို့လာတာဆိုပေမယ့် ဒီလောက်ခရီးအဝေးကြီးလာပြီးမှတော့ တခြားနေရာတွေပါ လည်ပြီးမှ ပြန်မှာပေါ့လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ မိုးဦးကလဲ စဉ်းစားထားပါတယ်။ ငါ့ကို ရစ်ရင်ငါလဲ ပြန်တော့ ပြောမှာပဲလို့။ နောက်ဆုံး တုံးမထုပေးရင်တောင်ဒီတိုင်း တော့မခံဘူး။ သူ့ထက်ကြီးတဲ့ Officer နဲ့ တွေ့ခွင့်ရအောင်တွေ့ပြီးပြောမယ်လို့။ ပြီးတော့ ဖိတ်စာ ပို့ထားတဲ့ ဘဘရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုလဲ အဆင်သင့် ရှာထားတယ်။ ငါတို့လဲ ဘာအမှားမှမလုပ်ဘူး၊ သူတို့ Procedure တွေအတိုင်း လိုက်လုပ်ထားလို့ပဲ visa တောင်ရပြီ။ အားနည်းတဲ့လူကို တမင်နှိ်မ်ချင်တဲ့ပုံစံဆိုတော့ တကယ်ကို မခံချင် ဖြစ်မိတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ညီမလေးရဲ့စာအုပ်ကိုလဲတုံးထု၊ မိုးဦးအလှည့်ကျတော့လဲ ဘာမှမမေးတော့ဘဲ တုံးထုပေးလိုက်ပါတယ်။ ၆လတော့ နေထိုင်ခွင့်တုံးထုပေးလိုက်ပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ မိုးဦးစိတ်ကတော့ အတော့ကို တိုပါတယ်။ ခုထိ နားမလည်နိုင်သေးတာက အဲလို အပြင်က မတ်တတ်ရပ်ပြီး ဆရာလာလုပ်တဲ့ အရာရှိက တကယ်ပဲ သူ့တာဝန်ဘောင်အတွင်းကလုပ်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ နိုင်ငံတွေက လာတဲ့ကိုယ်တွေကိုပဲ တမင်နှိပ်ကွပ်တာလား ဆိုတာပဲ။ ခရီးစဉ်တလျှောက် လုံး သူ့တယောက်ပဲ အဲလို ဆက်ဆံတာ ကြုံဖူးတယ်။
Immigration ကထွက်လာပြီး လက်ဆွဲအိတ်တွေရွေးပြီးတော့ X-ray စက် တခါထပ်ဖြတ်ရပါတယ်။ အကောက်ခွန်မမ က နင့်အိတ်ထဲမှာ အပင်တွေ၊ အရွက်တွေ၊ စားစရာတွေပါလားတဲ့။ မိုးဦးလဲ မုသားမပါပဲ ဖြေလိုက်တယ်။ ကိုရီးယားက၀ယ်လာတဲ့ ရေညှိတွေတော့ပါတယ်လို့။ :). တကယ်က အိတ် တအိတ်ထဲမှာ လက်ဖက်တွေ၊ ငါးခြောက်တွေအပြည့်ပါ။ မပါဘူးလို့ဖြေတာမှမဟုတ်တာ။ သယ်လာတာကို အကုန်မပြောတာပဲရှိတာ။ ဖြည်ကြည့်နေရင် လွှင့်ပစ် ခံရတာမခံရတာ အသာထား။ အချိန်ကကြာအုံးမှာ။ သူတို့က အသားစိမ်းတို့၊ မျိုးစေ့တို့ အပင်တို့သာ အ၀င်မခံတာပါ။ အခြောက်အခြမ်းတွေတော့ သယ်လို့ ရတယ်လို့ နောက်တော့ သိရပါတယ်။
အထုပ်တွေဆွဲလို့ အပြင်ကိုထွက်ရင်း နောက်တခါ ဘာများလွဲအုံးမလဲလို့ တွေးနေမိပါတယ်။ မလွဲတော့ပါဘူး။ လာကြိုတဲ့ အကိုတွေကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်တွေ့ပါတယ်။ အကိုတွေကလဲ အမြော်အမြင်ကြီးပါတယ်။ ဗိုက်ဆာလာမှာပဲဆိုပြီး မက်ဒေါ်နယ်တွေ အသင့်ဝယ်ထားတော့ မိုးဦးတို့လဲ ခုနက Immigration Officer အကြောင်းကို ရယ်ပွဲဖွဲ့ပြောနိုင်ပြီပေါ့။
Posted by မိုးဦးစံပယ် at 9:42 PM 1 comment:
အမေရိကားခရီးစဉ် - ၂
ဗီဇာရတာသေချာပြီဆိုတော့မှ လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ စီစဉ်ရတယ်။ မိုးဦးတို့ သွားမယ့် ၂ယောက်က ဘယ်လေကြောင်းလိုင်းရယ်လို့မဟုတ်၊ ဈေးသက်သာတာနဲ့ သွားချင်တယ်။ ရန်ကုန်ကနေ တနေရာမှာ transit လုပ်ပြီး ချီကာဂိုလေဆိပ်ရောက်ရင်ပြီးရော။ မိုးဦးတို့နေရမယ့်နေရာက ချီကာဂိုနဲ့ မိုင် (၂၀၀)လောက်ဝေးတဲ့ Springfield မြို့လေးပါ။ လေယာဉ်ပြောင်းစီးမယ်ဆိုရင် မိနစ် (၃၀)လောက်၊ ကားနဲ့သွားမယ်ဆို (၃)နာရီခွဲလောက်မောင်းရမယ့်ခရီးကို မိုးဦးတို့ကိုတော့ ချီကာဂိုမှာပဲ ကားနဲ့လာကြိုမှာပါ။ ဖြစ်ချင်တော့ကိုယ်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာလက အမေရိကန်ကျောင်းတွေရဲ့နွေရာသီကျောင်းပိတ်ချိန်နဲ့ တိုက်နေတော့ လေယာဉ်လက်မှတ်တွေက တခြားအချိန်ထက် ပိုဈေးကြီးနေတယ်။ နောက်ဆုံးရွေးစရာ ၂ခုက Qatar Airline က US$ 2000ပတ်ဝန်းကျင် ၊ transit စောင့်ရမှာ ၁ညကြာမှာမို့ လေဆိပ်ဟိုတယ်မှာနားဖို့အတွက် ပါပါပြီးသား၊ Korea Airline က US$2600 လောက် အင်ချွန်းလေဆိပ်မှာ transit က ၄နာရီလောက်ပဲစောင့်ရမယ်။ မိုးဦးတို့က ဒေါ်လာ ၆၀၀လောက်သက်သာမယ် ပြီးတော့ CNA မှာကြော်ငြာပါနေကျ Qatar Airline ကိုစီးချင်တာ။ လူကြီးတွေက အကြမ်းဖက်သမားတွေ စိတ်ပူလို့ အနောက်ဘက်ကလှည့်သွားတာထက် အရှေ့ဘက်ကသွားစေချင်တယ်။ ဒီတခါတော့ကိုယ့်ဆန္ဒထက် သူများဆန္ဒကို ဦးစားပေးစဉ်းစားဖြစ်တယ်။ အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ တဲ့တဲ့တိုးချင်လဲတိုးမယ် မတိုးချင်လဲမတိုးဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ်လို့ ကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်မှာ တခုခုဖြစ်သွားရင် ခါတိုင်းလိုကိုယ်တယောက်ထဲမဟုတ်ဘဲ ဆက်စပ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါ ရိုက်ခတ်မှာ မလိုလားတာနဲ့ Korea AirLine ကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်။
Korea AirLineက ရန်ကုန်ကနေပြီး ည ၁၁နာရီခွဲထွက်ပြီး အင်ချွန်းလေဆိပ်ကို မနက် ၇နာရီခွဲလောက်ရောက်မှာပါ။ အင်ချွန်းကနေ မနက် ၁၁နာရီလောက်မှာပြန်ထွက်ပြီး ချီကာဂို O'hare လေဆိပ်ကို နောက်မနက် ကိုးနာရီခွဲ လောက်ရောက်မယ်ဆိုတော့ ဟိုဘက်မှာလာကြိုရမယ့်လူတွေ အတွက်အချိန်လည်းအဆင်ပြေတယ် ။ အဲဒီတုံးကတော့ ချီကာဂို အိုဟဲလေဆိပ်ဆိုတာ ကိုယ်အမေရိကားမှာ ဘယ်သွားသွား ၀င်စို့ ထွက်စို့ လုပ်ရမယ့် လေဆိပ်မှန်းမသိခဲ့ပါဘူး။ နောက်တော့ အိုဟဲလေဆိပ်ထဲမှာ ပြေးလိုက်လွှားလိုက်ရတာ မိုးဦးတို့မှာ ချန်ဂီလေဆိပ်နီးပါး အကျွမ်းတ၀င်ဖြစ်သွား တယ်။
ခရီးသွားရမယ်ဆိုရင် ရှေ့ဆုံးကဖြစ်နေတဲ့ မိုးဦးတယောက် သွားရက်မယ့်ရက်နီးလာလေတက်ကြွလေပဲ။ Luggage ကလဲ တယောက် ကီလို (၅၀)ရတာဆိုတော့ အကြိုက်ထည့်လို့ရလို့ မိုးဦးကတော့ မီးပူရော၊ ဒရိုင်ရာရော အစုံထည့်တာပဲ။ ဟိုကလူတွေရီရောပဲ။ တခုပဲလိုသွားတာက ဟိုမှာ တွေ့မယ်လူတွေ၊ လိုက်ပို့ပေးမယ့်လူတွေ တော် တော်များများကို ကြိုမသိထားတော့ သူတို့အတွက် လက်ဆောင်လောက်ငှအောင် သယ်မသွားမိတာပဲ။ ဟိုမှာ မိုးဦးတို့နဲ့တွေ့တဲ့လူတိုင်း မြန်မာပြည်က ချည်ထည်ပုဆိုး၊ အချိတ်လုံချည်လေးတွေဆို တန်ဖိုးထားကြတာတွေ့တော့ များများမသယ်သွား မိတာ နောင်တရမိတယ်။
မိုးဦးတို့ သွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က လုပ်အားပေး အတွက်ဆိုတော့ ရိပ်သာမှာနေရမယ်၊ သွားရင်လဲ ရိပ်သာအစီအစဉ်နဲ့သွားရမယ်ဆိုတော့ ဈေးဝယ်ဖို့ အဆင်ပြေချင် မှ ပြေမှာဆိုပြီး ၂လစာ အ၀တ်အစားတွေ၊အသုံးအဆောင်တွေအကုန်ယူသွားတာ။ထွက်လည်ရင်ဝတ်ဖို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအ၀တ်အစားတွေ၊ မြန်မာဝတ်စုံဝတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေအတွက် မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ Luggage ကြီးတလုံး။ မြန်မာဝတ်စုံတွေက ကိုယ်လဲဝတ်ဖြစ်၊ အသစ်တွေဆို လက်ဆောင်လဲပေးဖြစ်၊ တချို့ဝတ်ပြီးသားပေမယ့် ရင်းနှီးသွားတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယူမယ်ဆိုပြီး ယူတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုတော့ သယ်သွားရတာတန်ပါတယ်။ တခြားဘောင်းဘီတွေ အင်္ကျိတွေက တကယ်ဆို ၁စုံ ၂စုံပဲယူသွားရင်တောင်ရတယ်။ ဟိုရောက်မှ ၀ယ်ဝတ်တာ ပိုအဆင်ပြေတယ်။ ၀ယ်မယ့်တူတူ။ မဟုတ်ရင် ပြန်ရင် ဒီကယူသွားတဲ့အ၀တ်တွေလဲပြန်သယ်ချင်၊ ဟိုက၀ယ်တာတွေလဲ ပါအောင်သယ်ရမယ်။ အပြန် ကီလို (၅၀) မလောက်ဘူး။ ဒါတောင် shopping လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် မပါဘဲသွားလိုက်တာ။
မိုးဦးရဲ့ Size က စင်္ကာပူမှာဆို ဘယ်တံဆိပ်က ဘာ Size ဆိုတာသိပြီးသား၊ ဒီရောက်တော့ သူတို့ cutting တွေကအကြီးကြီးတွေဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့တော်မယ့်ဟာတော့ တော်တော် ၀တ်ကြည့်ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘောင်းဘီဆို ခါးကတော်ရင် ပေါင်ကပွသလိုလို၊ ပေါင်ကတော်ရင် ခါးကပဲချောင်သလိုလို တထည်ပြီးထတည်စမ်းဝတ်ကြည့်ပြီး အဆင်ပြေတဲ့ size ရသွားရင်တော့ တော်တော်ဝတ်လို့ကောင်းတယ်။ Levis တွေဆိုတန်မှတန်၊ တထည်ကို ဒေါ်လာ ၄၀၊ ၅၀။ အ၀တ်အစားဖက်ရှင်ကို သိပ်စိတ်မ၀င်စားတဲ့လူမို့ size တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတမရှိဘူး။ မတူတဲ့ဆိုက် လေးငါးထည်လောက်ဆွဲချသွားပြီး သွားဝတ်ကြည့်ရင်တောင် ကွက်တိမကျ၊ တခါတလေ ခုနှစ်ထည် ရှစ်ထည်လောက်ဝတ်ကြည့်မှ ကိုယ်နဲ့တော်တဲ့ size ရတယ်။ လက်ကိုင်အိတ်၊ ဖိနပ် စတာတွေကတော့ size သိပ်စကားပြောစရာမလိုတော့ အဲလို ဒုက္ခသိပ်မများ။
အကျဉ်းချုပ်ရရင်တော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Brand ချင်းတူရင် မြန်မာပြည်မှာထက် စင်္ကာပူမှာဝယ်လို့ ပိုကောင်းတယ်။ ဈေးပိုပေါတယ်၊ ရွေးချယ်ဖို့ပိုများတယ်။ Discount ချတာလဲပိုများတယ်။ စင်္ကာပူမှာထက် အမေရိကားက ပို၍ ပို၍ ဈေးသက်သာပြီး ၀ယ်ချင်စရာကောင်းတယ်။ စင်္ကာပူ အောချတ်က shopping mall တွေမှာ တခမ်းတနား showcase လုပ်ထားတဲ့ Brand တွေ၊ အမေရိကားမှာ တော့ သာမန်ပဲ display လုပ်ထားတာ။ ရာသီအကူးအပြောင်းမှာ Brand အကောင်းတွေကိုအလကားနီးပါးဈေးနဲ့ရောင်းတာ ကိုယ်တွေ့သိလိုက်ရတယ်။ မူရင်းဈေး ဒေါ်လာ ၂၉၀လောက်ရှိတဲ့ Ralph Lauren ဂျက်ကက်တထည်ကို ဒေါ်လာ ၃၀နဲ့ ၀ယ်လိုက်ပြီးထဲက မိုးဦးတယောက် shopping သွားရင် SALE ဆိုတဲ့စာလုံးကိုသာရှာတော့တယ်။ အထုပ်ပြင်နေရင်းနဲ့ ချောတော ငေါ့သွားပြန်ပြီ။ မိုးဦး သင်ခန်းစာရသွား တာတော့ နောက်တခါများ အမေရိကားသွားလည်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် လက်ဆောင်ပေးဖို့ ဟိုကလူတွေ အသုံးဝင်မယ့်ပစ္စည်းလေးတွေရယ်၊ ရာသီဥတုအလိုက် ဟိုရာက်ရောက်ချင်းဝတ်မယ့် ၀တ်စုံ၂စုံ လောက်ရယ်၊ မြန်မာဝတ်စုံဝတ်ဖို့လိုမယ်ဆိုရင် မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေရယ်ပဲသယ်သွားတော့မယ်။ အိတ်ချောင်ရင်လဲ ချောင်ပါစေ။ အဲဒါမှ ဟိုကပြန်လာရင် ဟိုဟာလဲ မချန်ချင်၊ ဒီဟာလဲမချန်ချင် အကုန်သယ်ချင်ပြီး ပေါင်ပိုပေးရတဲ့ ဒုက္ခကလွတ်မှာ။
မိုးဦးက Luggage အသေးတလုံး၊ အကြီးတလုံးကို check-in လုပ်ပါတယ်။ Transit နဲ့သွားရတဲ့ ခရီးရှည်သိပ်သွားနေကျမဟုတ်ပေမယ့် သူများ ခရီးသွားအတွေ့အကြုံ ထားတာတွေကိုဖတ်ထား တာ တော်တော် အထောက်အကူရတယ်။ Handcarry အိတ်ထဲမှာ လိုလိုမယ်မယ် အ၀တ်အစား အပိုတစုံ၊ အနွေးထည်ပါးပါးတထည်၊ ရှောစောင်တထည်၊ သုံးနေကျ Skin care ပစ္စည်း ဗူးသေးလေး တွေထည့်ထားတဲ့ အိတ်သေးလေး၊ လိုလိုမယ်မယ်ဆောင်ထားနေကျ ဗိုက်နာ ခေါင်းကိုက်ပျောက် ဗမာ ဆေး၊ အင်္ဂလိပ်ဆေးနဲ့ ဗိုက်ဆာလာရင် သည်းမခံတတ်သူဆိုတော့ အဆာပြေစားစရာအထုပ်လေးတွေ၊ ဖုန်းcharger နဲ့ ကွန်ပျူတာ စတာတွေထည့်ပါတယ်။ Transit ဆိုလို့ အမေရိကားခရီးစဉ်မတိုင်ခင် မေလမှာ အင်ဒိုနီးရှားသွားတော့ စင်္ကာပူလေကြောင်းလိုင်းစီးလို့ ချန်ဂီလေဆိပ်မှာ transit လုပ်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံပဲရှိတယ်။ ချန်ဂီလေဆိပ်ကျတော့လဲ ကိုယ်တို့ဗမာတွေအတွက် အကျွမ်းတ၀င်ရှိနေတာဆိုတော့ ထူးထူးခြားခြား မဖြစ်မိဘူး။ အခု ခရီးစဉ်ကျတော့မှ မရောက်ဘူးတဲ့ လေဆိပ်ကနေ Transit လုပ်ရမှာဆိုတော့ နဲနဲတော့ စိုးရိမ်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဘက်လေယာဉ်ဆိုက်ပြီး ဟိုဘက်လေယာဉ်ထွက်ဖို့ ၃နာရီခွဲလောက် အချိန်ရသေးတာဆိုတော့ တခုခုလွဲမယ်ဆိုလဲ ပြင်ဖို့အချိန်ရသေးတယ်တွက်ရတာပဲ။ :)
Cheik in လုပ်တော့ ကိုယ့်ဟာကို ထွက်ချင်တဲ့အချိန်ထွက်၊ ထိုင်ချင်တဲ့အချိန်ဝင်ထိုင်လို့ရအောင် Aisle seat ပဲတောက်လျှောက်ရအောင် တောင်းလိုက်တယ်။ မဟုတ်ရင်ကိုယ် အပေါ့အပါးသွားချင်လို့ထွက်ချင် ရင်တောင် လျှောက်လမ်းဘက်မှာထိုင်နေတဲ့လူ အိပ်ငိုက်နေလား အရိပ်အခြည်ကြည့်နေ ရမှာ။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ မှတ်မှတ်ရရ ရှိတာကတော့ လုံးဝပြုံးယောင်မပြဘဲ ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ လေယာဉ်မောင်ဦးလေးကြီးပါ။ စူပုပ်နေတာမဟုတ်ပေမယ့် ရုပ်ကို အဲလိုတည်နေအောင် ဘယ်လိုများ ကျင့်ထားလဲမသိပါဘူး။ အင်ချွန်းလေဆိပ်ရောက်တော့ ဖဘမှာ ပိုစ့်တင်လိုက်သေးတယ်။ အိမ်ကအာဂျီးမားနဲ့များ ရန်ဖြစ်ထားသလား အာဂျားရှိရယ်လို့။
အဲလောက်ခရီးရှည်ကြီးတခါမှ မသွားဖူးတော့ ခရီးပန်းပြီး Jet Lag ရမှာစိုးပြီး အိပ်ပျော်အောင်အိပ်လိုက်တာ တရေးပဲ။ လေယာဉ်မယ်လေးတွေ ဘေးက တံခါးကို ဖွင့်လို့ နိုးလာချိန်မှာ လင်းချင်းနေပြီ။ ကိုရီးယားစံတော်ချိန်က မြန်မာစံတော်ချိန်ထက် ၂နာရီခွဲစောတာမို့ မိုးဦးတို့တွေက မနက်သုံးနာရီခွဲလို့ ခံစားရချိန်မှာ သူတို့အချိန်အတိုင်းဆို မနက်ခြောက်နာရီ ရှိပြီလေ။ ထူးမခြားနား လေယာဉ်မနက်စာကျွေးပြီး (မျှော်လင့်ထားသလို ကိုရီးယားစာမကျွေးပါ)။ ခဏနေတော့ ခုနှစ်နာရီခွဲလောက်မှာ အင်ချွန်းလေဆိပ်ကို ရောက်ပါပြီ။ Transit လို့ပြထားတဲ့ မျှားအတိုင်းလိုက်၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ဂိတ်မှာ Security Check in လုပ်ရပါတယ်။
Security ကထွက်လာပြီး နောက်ထပ်စီးရမယ့် ဂိတ်ကို လိုက်ရှာပါတယ်။ ဂိတ်တွေ့တော့မှ ငါတို့တော့ US သွားမယ့် လေယာဉ်နဲ့တော့ မလွဲနိုင် တော့ပါဘူးဆိုပြီး အထုတ်ချ အင်တာနက်သုံး၊ ပြီးတော့အိပ်ငိုက်။ ဟိုငေးဒီငေး။
ခဏနေတေ့ာဗိုက်ဆာလာတာနဲ့ ကိုယ့် Hand carry လေးကိုယ်ဆွဲပြီး စားစရာလိုက်ရှာတော့ တွေ့ပါပြီ စားချင်လှတဲ့ကိုရီးယားစာစစ်စစ်။ မိတ်အင် မြန်မာ ကိုရီးယားစာ တို့ မိတ်အင် စင်္ကာပူ ကိုရီးယားစာတို့ မဟုတ်။ ကိုရီးယားမြေမှာ စားရတဲ့ ကိုရီယားစာစစ်စစ်။
ဒါကမိုးဦးစားတဲ့ ကင်ချီထမင်းကြော်နဲ့ တွဲပေးတဲ့ ဟင်းချိုရည်နဲ့ မုန်လာဥဖြူ ဆားစိမ်။ အရသာက မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း စိတ်ကျေနပ်တယ်။ ကင်ချီထမင်းကြော်ကစပ်စပ်မွှေးမွှေးဆိမ့်ဆိမ့်၊ ဟင်းရည်က ချိုချိုလေးလေး၊ မုန်လာဥက ချိုချဉ်ကြွပ်ကြွပ်။ ခုတောင်ပြန်စားချင်လာပြီ။ ၈ဒေါ်လာ
ဒါက ညီမလေးစားတဲ့ ဆန်ခေါက်ဆွဲအလုံးကြီးနဲ့ ကင်ချီဟင်းရည်။ သူ့ခေါက်ဆွဲလဲ လေးလေးပင်ပင် ပူပူနွေးနွေးနဲ့ကောင်းတာပဲ။ မြန်မာအကြိုက်နဲ့ တထပ်ထဲ။ ခြောက်ဒေါ်လာခွဲ။
လေဆိပ်ဆိုင်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဈေးတော့နဲနဲကြီးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အရသာရှိတော့ ပေးရတာ တန်ပါတယ်။
စားသောက်ပီးတော့ Toilet ခန်းကိုပဲ ဟိုတယ်ခန်းအမှတ်ထားပြီး မျက်နှာသစ် အလှပြင်ပါတယ်။ တညလုံးနီးပါး လေဆိပ်မှာ ထိုင်စောင့်၊ လေယာဉ်ပေါ်မှာ အချိန်ကုန်နဲ့ ငြီးစီစီဖြစ်နေတာ အခုမှပဲ လန်းဆန်းတက်ကြွသွားပါတယ်။ အနံ့ကြိုက်ရင်၊ ဈေးလဲတန်ရင်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ရေမွှေးဆိုင်က Channel အစိမ်းရောင်လေးကို စမ်းဆွတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ နောက်ထပ် (၁၂)နာရီ လေယာဉ်ခရီးစဉ် အတွက် အင်အားအပြည့်ရှိသွားပါပြီ။
Posted by မိုးဦးစံပယ် at 5:44 PM2comments:
အမေရိကား ခရီးစဉ် - ၁
မယ်မိုးဦးတယောက် အမေရိကားကို မရည်ရွယ်ဘဲ ၂၀၁၄ခုနှစ်ထဲမှာ သွားလည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အမှတ်တရခရီးလေးမို့လို့ နောက်ကြာရင်မေ့သွားမှာစိုးလို့ ကြိုးစားပြီးရေးတာတောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ Procedure၊ အချက်အလက် တွေကိုအခု တော်တော်မေ့နေပြီ။
ဗီဇာလျှောက်တော့လဲ သူများတွေက ပိုင်ဆိုင်မှု စာရွက်စာတမ်းအထပ်လိုက်တင်တာ မြင်ခဲ့ဖူး၊ သူများကိုလဲတင်ပေးခဲ့ဖူးပေမယ့် ကိုယ့်အလှည့်ကျတော့ ကိုယ့်နာမယ်နဲ့လဲ မယ်မယ်ရရပြစရာမရှိတာမို့ မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်း နိုထရီပြန်ထားတာရယ်၊ အမေရိကားက ဖိတ်တဲ့စာရယ်၊ Form ဖြည့်တုံးက အလုပ်လုပ်နေတာလို့ ဖြည့်ထားတော့ အလုပ်က ခွင့် (၂)လ ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့စာရယ်ပဲတင်လိုက်ပါတယ်။ သွားဖို့စီစဉ်ထားတာက သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာ (၂)လ ၊ ဗီဇာ form စတင်တာက မေလ၊ အင်တာဗျူးးက ဇူလိုင်လ (၂)ရက်။ ဒါတော့ မှတ်မိသား။
ဗီဇာအင်တာဗျူးးတဲ့မနက်မှာ သူတို့ခေါ်တဲ့အချိန်ထက် (၁၅)မိနစ်စောသွားတော့ ကိုယ့်ထက်စောတဲ့လူတွေက တန်းစီနေပီ။ သားသမီး ဘွဲ့ယူလို့သွားမယ့်မိဘတွေ ၊ ကျောင်းသွားတက်မယ့်ခလေးတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းကဖိတ်လို့သွားလည်မယ့်သူတွေ စသဖြင့် ကိုယ့်အကြောင်းပြချက်နဲ့ကိုယ် စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ပုံတွေပါ။ မိုးဦးကိုလဲတခြားလူတွေ ဘယ်လိုမြင်မယ်မသိ။ ကိုယ့်ဟာကိုတော့ သိပ်စိတ်လှုပ်ရှားမနေဘူးထင်တာပဲ။ ဗီဇာရရင်လဲသွားလည်မယ်၊ မရတော့လည်း မသွားဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်မယ့်လုပ်တော့ အောင်မြင်ချင်တဲ့စိတ် လွန်ဆွဲနေတာပဲ။
ဗီဇာအင်တာဗျူးးတာက တော်တော်များများသိကြတဲ့အတိုင်း၊ အခန်းထဲမှာ ဗီဇာဝင်တဲ့လူ (၅၀) လောက်က ထိုင်စောင့်လို့၊ ကောင်တာမှာ ကိုယ့်နာမည်ခေါ်သံကြားရင် ဒေါ်လာ (၁၅၀) လား (၁၈၀) လားမသိဘူး၊ အရင်သွားသွင်း၊ ပြီးရင်တခါထိုင်စောင့်၊ နောက်တခါကိုယ့်နာမည်ခေါ်သံကြားရင် ကောင်တာကိုသွား၊ အထဲက officer နဲ့ မှန်တချပ်ခြား အမေးအဖြေလုပ်၊ ကိုယ့်ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတွေ၊ ကိုယ်ဖြေတဲ့အဖြေတွေ အခန်းကထိုင်နေတဲ့လူတွေလဲကြားနေရတာပဲ။ Officer ကျေနပ်လောက်အောင်ဖြေနိုင်ရင် သူတို့ကဗီဇာကြေးသွင်းခိုင်းတယ်။ နောက် (၂) ရက်ကြာရင် ဗီဇာကပ်ထားတဲ့ ပတ်စ်ပို့စာအုပ် သွားယူရုံပါဘဲ။
စောင့်နေရင်းပျင်းပျင်းနဲ့သူများ မေးနေတာတွေ နားစွင့်ကြည့်တော့ ကောင်လေးတယောက်၊ ဟိုမှာကျောင်းသွားတက်ဖို့ Student Visa သမား၊ သူတို့ အုပ်စုကိုအစထဲက သတိပြုမိတယ်။ အထက်တန်းအောင်ခါစအရွယ် ၁၀ယောက်ကျော်လောက် အားတက်သရော တိုင်ပင်နေကြ၊ စကားပြောနေကြတာ မြင်ရတာ မုဒိတာပွားမိတယ်။ ကိုယ်တွေ အဲအရွယ်တုံးက အဲလိုအခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးလေ။ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊ မိသားစုအခြေအနေတွေက ပျံချင်တိုင်းပျံဖို့ အခွင့်မသာခဲ့တဲ့ ငှက်မျိုးဆက်တခုပေါ့။
ဘယ်တက္ကသိုလ်တက်မှာလဲ၊ ဘာဆက်လေ့လာမှာလဲ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်တွေလှန်ကြည့်၊ ဒါနဲ့ပဲ တယောက်ပီးတယောက် ဗီဇာကြေးသွင်းခွင့်ရသွားကြတယ်။ နောက်သူတို့ထက် ၆နှစ် ၇နှစ်လောက်ကြီးမယ့်ကောင်မလေးတယောက်အလှည့်မှာတော့ မေးတာတော်တော်ကြာပီး စေ့စပ်တယ်။ မေးခွန်းနဲအဖြေတွေ နားစွင့်ကြည့်ရတာ ကောင်မလေးက ဟိုမှာ ကျောင်းတခါတက်ပီး ပြန်လာမှ အခုနောက်တခါ ထပ်သွားဖို့ဗီဇာလျှောက်တာ။ နောက်ဆုံးသူလဲ ဗီဇာကြေးသွင်းခွင့်ရသွားတယ်။
နောက်တခါတော့ အန်တီကြီးတယောက်။ သားဘွဲ့ယူတာတက်ဖို့သွားမှာ။ သူ့ကိုလဲ တော်တော် ကြာကြာမေးတာပဲ။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစစ်၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာ ၀န်ထမ်းဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတာလဲ စတာတွေကြားရတော့ ငါတို့လဲမလွယ်လောက်ဘူးထင်မိတယ်။
နောက်တခါ အန်တီတယောက်ကတော့ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတခုက ဖိတ်တာ။ သူ့ယောက်ျားက ဟိုမှာရှိပြီးသား၊ သူကျတော့ ဗီဇာကြေးသွင်းခွင့်မရခဲ့ဘဲ နောက်နေ့မှာ passport ပြန်လာထုတ်ဖို့ ပြောတာကြားလိုက်တယ်။ အင်း…ဒါဆို ငါတို့လဲအဲလိုပြောခံရမလားမသိ။ အိုဘာကြောက်စရာရှိလဲ။ ရရင်လဲရ။ မရတော့လဲ မရပေါ့။
ခေါ်ပါပီ။ မိုးဦးနာမယ်ကို။ visa officer က မိုးဦးနဲ့အတူသွားမယ့် ညီမလေးနဲ့ ၂ယောက်တူတူ ဖြေမလားဆိုတော့ အင်းပေါ့။ ပိုတောင်ကြိုက်သေး။ အဲ့နေ့မှ ၂ယောက်လုံးက ရိုးရိုးသားသားဖိုးသခွား ဗမာအကျီလေးနဲ့ ရိုးရာထမီလေးတွေနဲ့ သူကြီးသမီးပုံပေါက်နေလို့လားမသိဘူး။ Officer က လက်ဗွေနှိပ်တော့ မြန်မာလို instruction ပေးတယ်။ သင့်ရဲ့ ညာလက်ကို စက်ပေါ်တင်လိုက်ပါ။ လက်မကို နဲနဲဖိပါ။ ဘာညာပေါ့။ သူ့ဟာသူ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ဟုတ်တုတ်တုတ်။ သူ့ရဲ့ ၀ဲတဲတဲ မြန်မာစကားကြားတော့မှဘဲ အယောင်ယောင်အမှားမှား၊ ဘယ်နဲ့ ညာနဲ့ ပြန်စဉ်းစားရသေးတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ tall & handsome officer ကိုကြည့်ပီး သဘောကျလို့ ယောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ :)
နောက်တော့မှ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်လားဆိုတော့ နည်းနည်းလေးတော့ ပြောတတ်ပါတယ်ပေါ့။ နင်ဖြေးဖြေးပြောပေးလို့ရမလားလို့ ထပ်ကွန့်လိုက်သေးတယ်။ မိုးဦးတို့ကို ဘာကြောင့်သွားမှာလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာနေမှာလဲ၊ နင်က ၀န်ထမ်းဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ (၂)လတောင် ခွင့်ရလား၊ ပြန်ရင် အတူတူပြန်လာမှာလား စတဲ့မေးခွန်း (၅) ခု (၆)ခုလောက်မေးပီး ဗီဇာကြေးသွားသွင်းတော့တဲ့။ မိုးဦးတို့ (၂)ယောက်က ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ကြည့်နေတုံး ဘေးက မိုးဦးလိုပဲ ပတ်ဝန်ကျင်လေ့လာရေး စိတ်ဝင်စားပုံရတဲ့ ဦးလေးကြီးတယောက်က သမီးတို့ ဗီဇာရသွားပီ ၊ ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့မှ သြော်..ငါတို့ကိုမေးတာပြီးသွားပြီဆိုတာ သဘောပေါက်တော့တယ်။ အဲဒါနဲ့ Thank you ပြောပြီးပြန်ထွက်လာတော့ HaveaNice Trip တွေ ဘာတွေ လုပ်နေသေးတာ။ အခန်းပြင်ရောက်တော့မှ ငါတို့မေးတာ ခဏလေး၊ ငါက ဒီထက်ကြာကြာမေးစေချင်တာနဲ့ပြောပီးရီကြ ရသေးတယ်။ ချောပြီး ပြုံးပြုံးနဲ့သဘောကောင်းပုံရတဲ့ Visa Officer လေးနဲ့ ဒီထက်မက စကားပြောချင်သေးတာ။ ကိစ္စတခုအောင်မြင်သွားလို့ ကျေနပ်သွားတဲ့ရုပ်နဲ့ လူတယောက်ကို ဖြူဖြူစင်စင် သဘောကျနေတဲ့ ရုပ်၊ ၂ခုပေါင်းလိုက်တော့ သိပ်သိသာသွားတယ်နဲ့တူတယ်။ Security Officer ဦးလေးကြီးတွေက သမီးတို့ ဗီဇာရပြီနဲ့တူတယ်တဲ့။
တကယ်တော့ မိုးဦးတို့ကိုဖိတ်တဲ့ အမေရိကားက အဖွဲ့အစည်းကဖိတ်တဲ့စာကသိပ်ခိုင်မာလို့ပါ။ ဥက္ကဌ ဘဘက စာမှာ ဖိတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်း၊ အဲဒီကအခြေအနေအသေးစိတ်၊ ခရီးသွားရမယ့်အစီအစဉ်စတာတွေ တမျက်နှာရေးထားတာ Visa Officer တယောက်အနေနဲ့ လက်ခံချင်စရာအချက်တွေချည်းပါဘဲ။ အမေရိကားရောက်တော့ တချို့ မြန်မာအမကြီးတွေ အန်တီတွေက မေးကြတယ်။ ဗီဇာလျှောက်ရတာဘယ်လိုလဲတဲ့။ တချို့သူတို့ အမတွေ၊ အမေတွေကို အလည်ခေါ်ချင်တာ ဗီဇာခက်ကြလို့တဲ့။ ရတဲ့လူတွေဆိုလဲ ၂ခါ ၃ခါပြန်လျှောက်ရတယ်တဲ့။
အမေရိကန် ဗီဇာရတာပျော်လားလို့မေးရင် ရိုးရိုးသားသားဖြေရရင်ပထမဆုံးသွားလည်ရမယ့် အတွေ့အကြုံအနေနဲ့ ပျော်ပါတယ်လို့ပြောရမှာဘဲ။ ဆယ်တန်းအောင်ပီး သင်တန်းအတူတက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အမေရိကားမှာကျောင်းသွား တက်ကြတာ၊ တက္ကသိုလ်တွေပိတ်တော့ တခါထွက်သွားကြတာ ကိုယ့်ရှေ့မှာတွေ့နေပေမယ့်ကိုယ်က အားကျရုံဘဲတတ်နိုင်ခဲ့တာ။ ကိုယ့်မိသားစုအခြေအနေက သားသမီးကို အဲလို နိုင်ငံကြီးကိုပို့ကျောင်းထားဖို့တတ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမဟုတ်၊ ဆွေမျိုးရင်းချာဆိုတာလဲအဲဒီ့မှာ မရှိ၊ ကိုယ်တိုင်ကလဲ စကော်လာအပြည့်ရလောက်အောင်တော်တဲ့သူ မဟုတ်ဆိုတော့ ကျောင်းသွားတက်ချင်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အိပ်မက်လေး အကောင်အထည်မပေါ်ခဲ့တာ။ အခုလို ကိုယ့်ရဲ့ချွေးနဲစာလေးကလဲ ခရီးစရိတ်ကို ကာဗာလုပ်နိုင်တုံး၊ ဟိုဘက်ကအဖွဲ့အစည်း ကဖိတ်တဲ့အတိုင်း နေစရာ၊ စားစရာအတွက် ပူစရာမလိုပဲ လုပ်အားပေးလုပ်ရင်း အမေရိကားမှာ (၂)လတာ လည်ရတာ သာမန်လူတယောက်အတွက် ပျော်ရွှင်စရာပဲမဟုတ်လား။ နောက်နှစ်မှာ ပြန်သွားလည်ချင်လို့ လျှောက်လို့ ရရင်တောင် ၂၀၁၄တုံးကလိုတော့ ပျော်မှာမဟုတ်ဘူး။
သြော်.. မြန်မာပြည်မှာ သာမန်လူဖြစ်ရတာ ကံကောင်းတဲ့အချက်ရှိသား။ ပျော်တမ်းခဏခဏ ကစားလို့ရတယ်။ ဗီဇာရလို့ပျော်ရ၊ နိုင်ဂံခြားသွားလို့ပျော်ရ၊ မီးမှန်လို့ပျော်ရ၊ ပတ်စ်ပို့လုပ်တာ ပိုမြန်လာလို့ပျော်ရ။ သူများနိုင်ငံသားတွေ အဲလို အပျော်တွေ နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရန်ကုန်ကနေ ဆိုလ်းထိတလမ်းလုံး လုံးဝမပြုံးပဲ Service ပေးတဲ့ အွန်စောရဲ့ဦးလေး လေယာဉ်မောင်ကြီးအကြောင်းတော့ နောက်ပိုစ့်မှဘဲ။
Posted by မိုးဦးစံပယ် at 6:38 PM3comments:
ပြောင်းလဲသင့်တဲ့ မကောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်တွေ ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။
တထောင် နှစ်ထောင်ကိုကျတော့ ကပ်စေးနည်းပြီး သောင်းဂဏန်း၊ သိန်းဂဏန်းကိုတော့ မထင်မှတ်ဘဲသုံးမိတာ.
အသုံးစရိတ် သတ်မှတ်မထားဘဲသုံးမိတာ (အထူးသဖြင့် ခရီးထွက်ရင်)
တခုခု ဗြစ်တောက်ဗြစ်တောက်ပြောမိရင် မရပ်နိုင်တာ။
ကိုယ်လုပ်သမျှ ဆုံးဖြတ်သမျှ မှန်တယ်ထင်တာ.
Posted by မိုးဦးစံပယ် at 4:56 PM2comments:
27th SEA Games နှင့် မရည်ရွယ်ခဲ့သော သဲတပွင့် (၁)
ခုနေများ ဘကျောက်တို့ ရှိနေရင် ပါလေရာ မယ်မိုးဦးကိုဘာပြောအုံးမလဲမသိ။
လွန်ခဲ့တဲ့ (၂) နှစ် မယ်မိုးဦးရွာပြန်ပြီးအလုပ်စလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ကြားရတဲ့သတင်းတပုဒ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ SEA Games လုပ်မတဲ့လေ။ တီဗွီသရဲ မယ်မိုးဦးက ဟိုအိုလံပစ် ဒီအိုလံပစ် ဖွင့်ပွဲတွေ ပိတ်ပွဲတွေကို အားတက်သရော စောင့်ကြည့်နေကျ၊ အင်တာနက်မှာရေးတဲ့ ဘေဂျင်းအိုလံပစ်က ဘယ်လို၊ လန်ဒန်အိုလံပစ်က ဘယ်လို၊ စသဖြင့် သတင်းတွေ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်လျှောက်ဖတ် နေကျ ဆိုတော့ အမလေး ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ လူတွေက ဒီလောက် ကျပ်တည်းနေတာ SEA Games ကိုပိုက်ဆံတွေ ဒီလောက် အကုန်ခံပြီးလုပ်ဖို့စဉ်းစားနိုင်သေးတယ် .... ဘလာ...ဘလာပေါ့။
ဖြစ်ချင်တော့ မယ်မိုးဦး အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာက အားကစားအဖွဲ့ချုပ်တခုနဲ့ မဖြစ်မနေ ပတ်သက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တခုကို မလုပ်ဘဲနေလို့ရအောင် နည်းလမ်းသုံးလိုက်တော့ မယ်မိုးဦး တယောက် လွတ်ရာကျွတ်ရာကိုရောက်သွားပြီး ထဲထဲဝင်ဝင် ပတ်သက်စရာမလိုခဲ့ဘူး။ လိုအပ်တဲ့ အားကစားပစ္စည်းမှာရတာတို့၊ တခြားနိုင်ငံကအဖွဲ့ချုပ်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်တာတို့စတဲ့ ရုံးလုပ်ငန်းနည်းနည်းပါးပါး လောက်ပဲ လုပ်ခဲ့တယ်။
SEA Games လဲတဖြည်းဖြည်းနီးလာပီး အလုပ်တွေပိုပိုရှုပ်လာပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်တော့ ရင်ခုန်စရာမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ ဖွင့်ပွဲ ဆိုတာကြီးကိုလဲ နေပြည်တော်အထိသွားကြည့်ရလောက်အောင် မတက်ကြွလို့ အားလုံးအတွက် စီစဉ်ပေးပြီး ကိုယ်ကတော့ အိမ်မှာတီဗွီကနေပဲ ဝေဖန်ရေးနဲ့ လေကန်ရေးပေါ့။ ဖွင့်ပွဲကို ကြိုးစားပမ်းစား အချိန်ကုန်ခံပြီးလာကြည့်တဲ့ စလုံးက ဘောစိကတောင် နင်ကဆီးဂိမ်းကို သပိတ်မှောက်တာလား ဘာလား လာမေးနေသေးတယ်။ ဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိပါဘူးလို့။ အပင်ပန်းခံ သွားပြီး ကြည့်ရလောက်အောင် စိတ်မ၀င်စားလို့ပဲလို့ပြော လိုက်တော့ သိပ်တော့ ကျေနပ်ပုံမရဘူး။
ဇာတ်လမ်းက ဖွင့်ပွဲပြီး မှစတာ။ နေပြည်တော်မှာ ဖွင့်ပွဲကြီးဝှဲချီးကျင်းပပြီးပေမယ့် အားကစားအဖွဲ့ချုပ်တွေ ကိုယ်တိုင်ကလဲ ကိုယ့်အားကစားနည်းအလိုက် ဖွင့်ပွဲလုပ်တဲ့ထုံးစံရှိတယ်ဆိုပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ လုပ်မယ့်လုပ် သူများအောက်ကျတော့ မခံဘူးဆိုပြီး ကိုယ့်ထက်အရင် ဖွင့်ပွဲလုပ်တဲ့တခြားအားကစားနည်းတခုကို သွားကြည့်ပြီး အတုခိုးရတော့တာပဲ။
သူများကိုလည်းသွားအတုခိုးသေး၊ သူများအားနည်းချက်တွေကိုလဲရှာလိုက်သေး။ အကြံတူနောက်လူသာ စမြဲဆိုတဲ့စကားပုံလိုပေါ့။ အဲဒီ့အထိလဲ နိုင်ငံချစ်စိတ်ဆိုတာကိုသတိမပြုမိသလို၊ SEA Games ကိုအားပေးချင်စိတ်လဲ မရှိသေးတာ အမှန်ပဲ။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တခုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တခုနဲ့ပဲ စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းခံပြီး အကြိုညစာစားပွဲနဲ့ ကိုယ့်အားကစားနည်း ဖွင့်ပွဲလေးကို စီစဉ်ပေးခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် ဖွင့်ပွဲမတိုင်မီ အကြိုညစာစားပွဲမှာ အိမ်ရှင်နိုင်ငံရဲ့ အားကစားအဖွဲ့ချုပ်ကလူအနေနဲ့ တခြားနိုင်ငံက ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဧည့်ဝတ်ကျေအောင် ကြိုးစားနေရင်း ကိုယ်အတ္တလေးကို ကိုယ်ပြန်မြင်လိုက်ရတယ်။ ညစာစားပွဲလုပ်နေတုံး အာရှအဖွဲ့ချုပ်က တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အစီအစဉ်အရ ပြိုင်ပွဲဝင် နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီ စင်မြင့်ပေါ်တက်ပြီး သီချင်းတပုဒ်စီဆိုခိုင်းတော့ သူများနိုင်ငံတွေက သူတို့ဟာသူတို့ ဘာတွေဆိုမှန်းတော့မသိဘူး။ နားထောင်လို့တော့ကောင်းသား။ ......... အားကစား ကမ္ဘာကိုလွှမ်းရမည်..... ဆိုတာမျိုးတွေပါရင်လဲ ပါမှာပေါ့နော်။ ကိုယ်မှနားမလည်တာ။ ကိုယ့်မြန်မာအသင်းအလှည့်ကျတော့ စိတ်ပူမိသား။ ညီညီညာညာမှ ဆိုနိုင်ပါ့မလား။ တခြားနိုင်ငံ သီချင်းတွေလို့မှ တက်တက်ကြွကြွရှိပါ့မလားလို့လေ။
ကိုယ်နဲ့သိပ်ရင်းနှီးမှုမရှိတဲ့ မြန်မာအသင်းအားကစားသမားလေးတွေရဲ့ မြန်မာ .... မြန်မာ တို့မြန်မာ နိုင်ပြီ၊ မြန်မာနိုင်ပြီဟေ့.... ဇွဲမာန်ဝင့်ချီ.. တို့မြန်မာနိုင်ပြီ... လို့လဲကြားလိုက်ရော အခုတကယ်ပဲ နိုင်နေတဲ့ အတိုင်း စိတ်ဓါတ်တွေ တက်ကြွသွားလိုက်တာ... သူတို့နဲ့အတူ ဘယ်အချိန်က လိုက်ဆိုနေမိမှန်းမသိဘူး။ တကြော့ပြီးတကြော့ လည်ချောင်းတွေနာလာတဲ့အထိ။ အဲဒီသီချင်းလေးက တီဗွီကလွှင့်လားမလွှင့်လားတော့ မသိဘူး။ ဘယ်သူရေးပြီး ဘယ်သူဆိုတာလဲမသိဘူး။ ဒါပေမယ့် နားထဲစွဲလွယ်ပြီး နှစ်ခါလောက် နားထောင် လိုက်တာနဲ့ လိုက်ဆိုလို့ရသွားရော။ စိတ်အားတက်ကြွဖို့လဲကောင်းတယ်။ အားကစားသမားတွေရော အားပေးတဲ့ပရိသတ်ရော ပြိုင်ပွဲတလျှောက် ဒီသီချင်းပဲဆိုပြီး အားပေးကြတာ။
ဒါနဲ့ပဲညစာစားပွဲပြီးခါနီးကျတော့ အားကစားသမားလေးတွေက အမှတ်တရဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြ၊ အချင်းချင်း နှုတ်ဆက်ကြလုပ်နေတုံး အင်ဒိုနီးရှားအဖွဲ့က အားကစားသမားတွေက ဗြုံးဆို အုပ်စုလိုက် ချာချာလိုမျိုးကကွက် တခုစပြီး ကပါလေရော။ အစက.. ကိုယ်တွေကသဘော မပေါက်သေးဘူး။ နောက်မှ ဘေးက ညီမလေးတယောက်ဆီဖုန်းဝင်လာ ပြီးသူကလှမ်းပြောတယ်။ အမရေ.. မြန်မာဘောလုံးအသင်းကတော့ သွားပြီဆိုမှ သဘောပေါက်လိုက်တယ်။ ပထမတော့ အားကစားစိတ်ဓါတ်ကိုကြိုးစားမွေးပီး မုဒိတာပွါးဟန်ဆောင် လိုက်သေးတယ်။ နောက်တော့ အိမ်ရှင်ကိုမှအားမနာ သူတို့အဲလောက်ပျော်ပွဲဆင်နေတော့ မရှုစိမ့်စွာနဲ့ အဖွဲ့ချုပ် လူကြီးတွေကို သွားချွန်တွန်းလုပ်တာပေါ့။ ပွဲသိမ်းဖို့ကောင်းပြီလို့။ အဲလိုအားကစား စိတ်ဓါတ်ရှိတာနော်။
ပထမဆုံး ရွှေတံဆိပ်ရချိန်ကိုတော့... အပိုင်း (၂)
Posted by မိုးဦးစံပယ် at 9:13 PM2comments:
အားတက်သရော အိတ်မှောက်ဖာသွန်နေတဲ့ ပျော်စရာ ဘလောဂ့်လေးတွေကိုဝင်ဖတ်ရင်း မယ်မိုးတယောက်လဲ ကိုယ့်ဘလောဂ့်လေး ကိုယ်ပြန်အသက်သွင်းချင်စိတ် ပေါ်လာမိပါတယ်။ တိတ်တိတ်လေးပျောက်နေပြီး တိတ်တိတ်လေးပဲပြန်လာပါပြီ။
ဘလော့ဂ်မရေးဖြစ်တဲ့အချိန်တွေကို ကိုယ့်အတွက်ရော အများအတွက်ပါ အကျိုးရှိမယ့်အလုပ်တွေ ပိုလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ ထင်တိုင်းမပေါက်ခဲ့ပါဘူး။ စာနည်းနည်း ပိုဖတ်ဖြစ်တာပဲရှိပါတယ်။
ခုတော့ ဘလောဂ့်လေးကိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ရင်ဖွင့်ရာ ဒိုင်ယာရီလိုသဘောထားပြီး ဆက်ရေးပါတော့မယ်။ အရင်တုံးကတော့ အိမ်နဲ့ဝေးနေရတယ်ဆိုပြီး အလွမ်းပြေဓါတ်ပုံလေးတွေတင်ရင်း ဓါတ်ပုံအကြောင်းပြု ပြီး ရေးချင်တာလေးတွေ ရေးခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ အိမ်လဲပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ လွမ်းတာကိုလဲ စာဖွဲ့လို့မရတော့။
လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်လောက်တုံးကတော့ မော်နီတာစကရင်မှာ ၀က်သားတုတ်ထိုးပုံတို့၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲပုံတို့၊ ငါးထမင်းနယ်ပုံတို့မြင်လိုက်တာနဲ့သွားရည်တောက်တောက်ကျပြီး မော်နီတာကြီးကိုပဲကောက်ဝါးရတော့မလိုလို၊စီးတီးဟောလ်ပဲ ပြေးရတော့မလိုလို၊ မီးဖိုချောင်ထဲပဲဝင်ပြီး ရှိတာလေးနဲ့ အိုးနင်းခွက်နင်း ချက်စားရတော့မလိုလို ဖြစ်ခဲ့ရာက ခုတော့ ကံဇာတာတလှည့်ပြောင်းလို့ အိမ်ချက်၊ ဆိုင်ချက် ကြိုက်တဲ့အချိန်စားနဲ့ အတော်ဇိမ်ကျနေပါတယ်။
ဘူးသီးချဉ်ရည်ကျဲနဲ့ ငါးဖယ်ဆုပ်၃လုံး၊ ချဉ်စုတ်လန်နေတဲ့ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်ချဉ်ဟင်းနဲ့ ၀က်သားနှပ်၂တုံး၊ ကျဲတောက်တောက်ပဲနီလေးဟင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်း၊ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်နဲ့ ဘဲဥကုလားဟင်း စတဲ့ အခုရုံးကကျွေးတဲ့ နေ့လည်စာကိုသူများတွေက စောဒကအမျိုးမျိုးတက်နေချိန်မှာ ကိုယ်ကတော့ ထမင်းတပန်းကန်တော့ ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိဘူး။ မယ်မိုးစားနိုင်တယ်နော်လို့ တအံ့တသြ ဆိုလာသူတွေကို တပင်တပန်းမရှင်းပြတော့ပါဘူး။ တနေ့တနေ့ ဖုကော့ဒ်ထဲမှာ တလည်လည်နဲ့ဘာစားရမှန်းမသိဘဲ ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေတဲ့ နေ့လည် ထမင်းစားချိန်တွေကို ပြန်သတိရမိရင် အခုလို ဗမာထမင်းနဲ့ဟင်း ကို ကိုယ်ဆာနေတဲ့အချိန်မှာ ထမင်းပွဲ ရှေ့ရောက်စားနေရတာ ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လောက်အဆင်ပြေမှန်း သူတို့မသိဘူး။
မုန်ဟင်းခါးစားချင်ပြီး မုန့်ဖတ်ဝယ်ဖို့/ ပြုတ်ဖို့ အချိန်မစောင့်နိုင်လို့ ရယ်ဒီမိတ်မုန့်ဟင်းခါးတအိုးချက်ပြီး ထမင်းကြမ်းနဲ့ မြိန်ရည်ရှက်ရည်စားခဲ့တာတွေ၊ ချဉ်ပေါင်ကြော်ထဲကို ပုဇွန်ကြော်ထည့်ရေရောပြီး ချဉ်ပေါင်ဟင်းလုပ်စားခဲ့တာတွေ သူတို့ သိရင် ရောမရောက်ရဲ့နဲ့ ရောမလိုမကျင့်နိုင်ဘူးလားလို့ မေးရင်လဲ ခံရမှာပဲ။ အခုတော့လည်း အမှတ်ရစရာအဖြစ်အပျက်လေးတွေပါပဲ။ အရင်တုံးကတော့ အဲဒါဟာ ဘ၀ကို ရုန်းကန်နေရတာပဲလို့ကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကိုတွေးပစ်လိုက်တာ။
ဆန်ထုတ်သယ်၊ ဆီပုံးဝယ်၊ ကြက်သွန်အိတ်ဆွဲခဲ့ရတဲ့နေ့တွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် အခုက တကယ်ကို ဂွတ်လိုက်ဖ်ပါဘဲ။ အရင်တုံးက အဆင်သင့်ရခဲ့တာတွေကိုတန်ဖိုးမထားတတ်ခဲ့တာ ကိုယ်တိုင်မလုပ်မဖြစ် ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံပြီးမှဘဲ တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်းသိပါတယ်။
အရင်တုံးကလဲ စာရေးရင် ဟိုရောက်ဒီရောက်။ ခုလဲ ဟိုရောက်ဒီရောက်စာစုပါပဲ။
Posted by မိုးဦးစံပယ် at 8:46 PM4comments:
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ (၂၁)ရက်နေ့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ၀ရဓါတု ရတနာရာမအသင်းတော် ဓါတ်တော်တိုက် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန် သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲမှာ ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အင်းလေးမိသားစုရဲ့ ပဒေသာပင်အလှူ ဓါတ်ပုံလေးတွေပါ။
ကထိန်ပွဲကျင်းပရာ Yeo Building ကို ပဒေသာပင်တွေလှည့်ဖို့နေရာယူနေကြတာပါ။
ကွမ်းတောင်ကိုင်၊ ပန်းတောင်ကိုင်တွေပြီးတော့ ပဒေသာပင်တွေ အစဉ်အလိုက်နေရာယူပြီး Yeo Building တပတ်ပတ်ကြကြတယ်။
...မကလဲတီး...ကလဲတီး၊ ....မတီးလဲက...တီးလဲက။ တီးတဲ့လူကတီးမှတော့ ဓါးသိုင်း၊ တုတ်သိုင်းမကရရင်တောင် လက်သိုင်းပဲကမယ်။
ပအိုဝ့်အဖွဲ့က ယူလာတဲ့အတီးပစ္စည်းတွေငှားပြီးတီးကြသေးတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်ကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရိုးရာတူရိယာတွေထဲမှာ အိုးစည်၊ လင်းကွင်း၊ မောင်း စတာတွေပါဝင်ပြီး အရွယ်အစား အနည်းငယ်ကွာခြားချက်ရှိပေမယ့် အခြေခံအားဖြင့် တူညီကြပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ သူတို့လဲ သယ်ရလွယ်အောင်နဲ့တူပါတယ်။ အိုးစည် - ၁လုံး၊ လင်းကွင်း - ၁ခုပဲပါပေမယ့် မောင်းကတော့ ငါးလုံးခြောက်လုံးလောက်ကို ယူလာပါတယ်။ အိုးစည်ကလဲ တီးရလွန်းလို့အသံကသိပ်မထွက်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ရှိတာနဲ့ တီးကြ၊ ပျော်ကြတာပဲ။
Posted by မိုးဦးစံပယ် at 11:53 PM6comments: